Candy Crush အဆင့် 419 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ - Candy Crush ဂိမ်း - အခမဲ့ဘဝပုံစံများသိကောင်းစရာများအရိပ်အမြွက်
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် / အမျိုးအစား / Candy Crush အဆင့် 419 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ သြဂုတ်လ 7, 2021 အားဖြင့် Isobella ဖရန့် Comment တစ်ခု ချန်ထားခဲ့ပါ။
ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်. စိန်ခေါ်မှုရှိသောကမ္ဘာတွင်သူတို့ထဲကအကောင်းဆုံးကိုသူတို့ခံစားရသည်. ၎င်းတို့သည်ရှုပ်ထွေးသောအဆင့်ကိုဖြေရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်းများကိုထုတ်ယူရမည်ဖြစ်သည်. သို့သျောလညျး, တစ်ခါတစ်ရံအသုံးပြုသူများသည်မှီဝဲရ. သေချာပါတယ်, ဤအချိန်သည်သင်ပဟေpိကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီနိုင်သောမည်သည့်နေရာမှမဆိုလမ်းညွှန်သေးသေးလေးတစ်ခုလိုအပ်သည်.
ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောပါကဘာဖြစ်မည်နည်း? သေချာပါတယ်, Candy Crush ရဲ့အဆင့် 419 ခက်ခဲတဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်. လူများသည်ယခင်အဆင့်များရှင်းလင်းပြီးနောက်၌ပင်ဤအဆင့်တွင်မှီဝဲလေ့ရှိသည်. သူတို့ကဒီဖြေရှင်းဖို့လမ်းညွှန်မှုတစ်နည်းနည်းလိုအပ်ပါတယ်. ဒါအတွက်, သင်ရုံမှတဆင့်သွားနိုင်ပါတယ် သကြားလုံး Crush အဆင့် 419 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ.
ဤအဆင့်သည်သင်၏အမှာစာအားလုံးကိုစုဆောင်းရန်ရည်ရွယ်သည်. စုစုပေါင်း, ရှိပါတယ် 100 အဝါရောင်သကြားလုံးများ,5သကြားလုံးပတ်ရစ်, နှင့်2အရောင်ဗုံး. သင်ဤအဆင့်ကိုကျော်လွန်ရန်ဤစုဆောင်းရန်လိုအပ်သည်. ထို့အပြင်, ဒီအဆင့်ကိုအနိုင်ယူဖို့လည်းသင်စုစုပေါင်းဂိုးသွင်းဖို့ရှိသည် 18000 မှတ်. ထိုသို့ပြုရန်သင့်တွင်အများဆုံးရှိလိမ့်မည် 50 ရွေ့လျား.
သော်လည်း 50 သင်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုစတင်သောအခါလှုပ်ရှားမှုများသည်အမှန်တကယ်အားများစွာကြည့်ရှုသည်. အကြောင်းပြချက်မှာသင်၏လက်၌အလုပ်နှစ်ခုရှိသည်. ပထမတစ်ခုကအမြတ်ရဖို့ပဲ 18000 ရမှတ်များနှင့်ဒုတိယတစ်ခုမှာသင်၏အမှာစာအားလုံးကိုစုဆောင်းရန်ဖြစ်သည်. ပြီးမြောက်ရန်လည်းခက်ခဲပုံရသည်? ကောင်းပြီ, သင်စိတ်မပူပါနဲ့ သကြားလုံး Crush အဆင့် 419 ကြော်ငြာအကြံပေးချက်များ cheats မင်းတို့ကိုမင်းကိုပေးတာကမင်းကမင်းကိုပိုလွယ်အောင်လုပ်တယ်.
သင်ကောင်းစွာအဆုံးသတ်ရန်ကောင်းစွာစတင်ရန်လိုအပ်သည်. ဒါဟာရှုပ်ထွေးတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်လျော်တဲ့နည်းဗျူဟာတစ်ခုနဲ့စတင်ပါ. Candy Crush အဆင့် 419 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ ငါတို့ထောက်ပံ့ပေးတာကမင်းတို့ကိုဗျူဟာကျအောင်ကူညီပေးလိမ့်မယ်:
စတင်ရန်, meringues ဖယ်ရှားပါ. သငျသညျတတ်နိုင်သမျှအနည်းငယ်ရွေ့လျားအတွက်သူတို့ကိုဖယ်ရှားသင့်ပါတယ်. ဤရွေ့ကား, သင်သာဤအဖယ်ရှားခြင်း၌ဤရွေ့လျားအသုံးချလို့မရပါဘူး. လူတစ်ယောက်ဟာရှုပ်ထွေးတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ရမယ်
အဆိုပါ meringues ရှင်းလင်းခြင်းအားဖြင့်, အထူးသဖြင့်သကြားလုံးတွေအတွက်နေရာဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာကိုဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်. အပြင်, သင်ရရှိနိုင်သည့်မည်သည့် combo လုပ်ရန်ကြိုးစားပါ.
အစပိုင်းတွင်၎င်းသည်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော်သင် meringues အချို့ကိုသင်ဖယ်ရှားပြီးလျှင်လုပ်ငန်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူလာလိမ့်မည်. အဝါရောင်အမိန့်လိုအပ်ချက်သည်, သင်၏ရောင်စုံဗုံးများကိုအဝါရောင်သကြားလုံးများနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်သည်. ဒီဟာကိုသင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခြားနည်းလမ်းမရှိပါ.
ဒီပြီးနောက်, သငျသညျကြိုးစားရန်နှင့်ပွဲစဉ် 4s ဖွဲ့စည်းရန်ရပါလိမ့်မယ်, ပွဲ 5s, နှင့် L သို့မဟုတ် T ကိုပုံစံမျိုးစုံ.
သင်သည်ထိုအထူးသကြားလုံးများကိုပြုလုပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်, အကျိုးဆက်သင်ဘုတ်အဖွဲ့အများစုကိုရှင်းလင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်မှတဆင့်သူတို့ကို join.
အရေးအကြီးဆုံးကတော့, သင်အလိုလျောက်အချက်များနှင့်အတူသင်၏အဝါရောင်အမိန့်အများစုကိုစုဆောင်းပါလိမ့်မယ်. အဝါရောင်အမိန့်သည်အခြားအမိန့်အားလုံးနှင့်အတူပြည့်စုံသည်နှင့်အမျှသင်၏အဆင့်ကိုအနိုင်ယူရန်လိုအပ်သည့်အမြင့်ဆုံးရမှတ်များရရှိခဲ့သည့်အတွက်သင်၏လုပ်ငန်းပြီးဆုံးလိမ့်မည်။.